नेपालकै नं.१ र ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सि.जी.ले गर्मी मौसमलाई ध्यानमा राखि विभिन्न किसिमका आकर्षक एवं नयाँ मोडलका फ्यान र कुलरहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
विभिन्न साइज र स्वरुपमा धेरै भन्दा धेरै प्रकारमा फ्यानहरु ल्याएको छ । जसमा सिलिङ फ्यान, स्ट्याण्ड फ्यान, रिजार्जयबल फ्यान, अल पर्पोज फ्यान, एक्जस्ट फ्यान, टेबल र वाल फ्यान जस्ता रहेका छन् ।
यी सामानहरू आफ्नो आवश्यकता अनुरुप छानी–छानी सहुलियत दरमा खरिद गर्न सकिने ब्राण्डले जनाएको छ ।
सि.जी.ले अहिले सिलिङ फ्यानमा अकर्षक डिजाईन, धेरै टर्क मोटर र आर.पि.एम. रहेको, फ्यान चलाउदा विभिन्न किसिमका कलरहरु फाल्ने जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् । त्यस्तै स्ट्याण्ड फ्यानमा पाँच वटा सम्म ब्लेडहरु रहेको छ, जसको कारण धेरै भन्दा धेरै हावा प्रवाह गर्दछ ।
रिमोट पनि रहेकोले अब तपाईहरुले यि फ्यानहरु सजिलै चलाउन सकिनेछ ।
बत्ती गएको समयमा पनि चिसो हावा लिनको लागि सि.जी.ले चार्ज गरेर चलाउन मिल्ने रिर्चाजेयबल फ्यानहरु समेत ल्याएको छ । होटल र अफिसमा सजिलै प्रयोग गर्न मिल्ने टेबल र वाल फयन ल्याएको छ । तपाईको किचेन भित्रको हावालाई बाहिर फाल्न एकजस्ट फयन रहेको छ । यसरी सि.जी.ले विभिन्न प्रकारका फ्यानहरु उपलब्ध गराई तपाईको जिवन शैली सहज बनाइदिएको छ ।
त्यस्तै अर्को नेपालकै कुलरहरुमा वाईडिएस रेन्ज बन्न सफल सि.जी.का कुलरहरु १४ प्रकारमा ल्याएको छ, जसको कारण तपाईहरुले सजिलै आफ्नो बजेट र आवश्यकता अनुरुप छानि छानी घर ल्याउन सकिनेछ ।
कुलरका प्रकारहरुमा डेजर्ट, विन्डोज, टावर र पर्सनल जस्ता रहेका छन् । यी कुलरहरुमा प्रायः सबैमा रिमोट पनि उपलब्ध गराएको छ ।
यसको मुख्य विशेषताहरु भनेको हनिकम प्याड, पावरपुल मोटर, आईस च्याम्बर, कार्बन फिल्टर, इनर्जी सेभिङ आदि जस्ता रहेका छन् । हेर्दा निकै नै आकर्षक भएको कारण यि कुलरहरुले तपाईहरुलाई मात्र नभई तपाईको कोठाको समेत सोभा बढाउने छ । यस्ता यस्ता धेरै भन्दा धेरै विशेषताहरु भएकै कारण आज बजारमा सि.जी.को फ्यान र कुलरहरुको माग आकाशिएको छ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ह्याम्स हस्पिटलबीच...
एनसेलको पेएज यूगो डेटा अब ४० पैसा प्रति एमबीसम्मम...
इसेवाले पायो आइएसओ २७००१ः २०१३ मान्यता प्राप्त प्रम...
शुरु भयो चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल, होम डेलिभरी पनि गरिने
गोविन्द केसीको अनसन 'सुहाउँदो' नभएको सरकारको टिप्पणी, फिर्ता लिन माग
के महाभारतको लडाईं सबैभन्दा पहिलो विश्वयुद्ध हो ? विज्ञहरूको यस्तो छ धारणा